Warbixintii ugu Danbeysay COVID19 Itibooya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Warbixintii ugu Danbeysay COVID19 Itibooya
warbixintii ugu danbeysay itoobiya xanuunka saf marka ah ee COVID19 warbixintii ugu danbeysay ee maanta
136 qof oo dheeraad ah ayaa laga helay COVID19 24 saac, iyadoo tirada guud ee xanuunkan qabtaa itoobiya ay noqoneyso 2,156.
17 qof ayaa soo kabsaday, taas oo tirada guud ee soo kabashada noqotay 361.
Tirada bukaannada xaaladdoodu liidato ayaa weli ah 32, oo la mid ah tii shalay, laakiin tii ugu sarreeysay illaa iyo hadda waxay ahayd tii shaley.
Natiijooyinka 136 caabuqyada cusub waxay ka soo baxeen 4, 775, baaritaanno sheybaar, laga soo bilaabo 6, 092 tijaabooyinka shaybaarka shalay
inta ka bogsatey:
** 17 qof oo dheeri ah ayaa soo kabsaday 24kii saac ee la soo dhaafay, iyagoo tirada guud ee ka bogsatey ka dhigeysa 361.
8 ka mid ah dadka soo kabsaday waxay ka yimaadeen Addis Abeba; 5 waxay ka yimaadeen #Amhara; iyo 2 mid kastaa wuxuu ka socdaa gobolada Afarta iyo #BenishangulGumuz.
** Ma jiro wax tilmaamo ah oo ku saabsan taariikhda safarka ee dibedda, ama la xiriir raadinta warbixinta maanta jirta, laakiin Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegtay inay jirto deg deg u joogitaan #CommunityTransmissions.
** 136, 85 waa rag halka 51 ay yihiin haween da’doodu u dhaxayso 1 ilaa 97 sano jir.
** 124 waa #Ethiopia halka 12ka kale ay yihiin muwaadin dalal kale (magacyada wadamada shisheeye laguma xusin warbixinta maanta.)
** Tiradii 136, 115 waxaa lagu aqoonsaday magaalada #AddisAbeba; 9 waxay ka yimaadeen #Oromia; 7 waxay ka yimaadeen #Tigray; 2 waxay ka yimaadeen #Harari; 2 ka #Somali; iyo 1 wuxuu ka yimid #SNNPRS.
** Ethiopia ilaa iyo hadda waxay sameysay 147, 735 tijaabooyin shaybaar, waxayna leedahay 1,766 xaalado firfircoon ama bukaanno jooga xarumaha daaweynta / karantiimada ee kala duwan, oo ay kujirto Millennium Hall Hall dib loogu soo celiyay. AS